Mustafe martinow midh waan kugu taageeray , midh na waan kaala tallinayaa iyo midh aan kugu la tallinayo!! Dr.khadar | Cadceed newssite
Mustafe martinow midh waan kugu taageeray , midh na waan kaala tallinayaa iyo midh aan kugu la tallinayo!! Dr.khadar
1. waxa aan kula ayidayaa aragtida ah ( in calanka Somaliland dibu-qaabeyn lagu sameeyo ) oo lagu daro ( jeex buluug ah) oo u taagan calanka cirka, badaha iyo dhamaan qayb ka ah dalalka quwadaha dunida , gaar ahaan dhamaan dalalka reer galbeedka ; iyadoo ujeedadu tahay- sir barako oo ku jirta; waxa aan si weyn kuula ayidayaa in ( xidigta madow) ee calanka Somaliland badhtan kan u yuurarta xidig ama xidigo cad-cad lagu badalo !! sababtoo ah waa habaar sidiisa u yaal; waayo ma jirto dunida xidig madow !! waa wax lala yaabo ! dalalkii dunida carabta ee xidigaha madoobaa maanta wey burbureen! Waa isla habaarka ay yaboohinayeen; maqaal aragtidan oo kale faafinaya waxa ku baahiyey warbaahinta maxaliga ah 1/27/2018.
B) Nidaam ka fadaraalka ah maaha fikir la inoo soo waariday oo ay tahay in aynu iskaga hayno hangool labadiisa faraaq; waxa uu mug iyo milgo leh uga qayb ahaa hab dhaqan nololeedkeenii hore taniyo jiritaanka isir keen!! Daliil waxa u ah, ( Hargaisa waa 4 daamood oo daan walba beeli ay isku xoontay meelaha qaar haba la wada yaalee) bal u fiirso gobolada yaa gobol walba reer ku ururiyey ama u badiyey gobol si sooc ah ? iyada oo sidan xaalku soo ahaa ayaa walaalo is-jecel oo tallo wada leh iyo tallo kala gaara ah la soo ahaa waligeed!! Ma leeka , mana qabato meesha marka la soo hadal qaado fadaraal in aynu sidii xoolaha u didno ; waayo waa hab dhaqan maamul nololeed keenii hore; sidan waxa ah oo aad wada ogtihiin, ( UK, USA, UAE and ethoipia ) iyadoo ingiriiskii dawladnimada ina baray ee aynu guridambeyska u aheyn yahay 4 dawladood oo isku hal dawlad ah yahay iyo maraykan kii aynu dastuurka ka dheeganay 54 dawladood oo isku hal dawlada yahay ; is-yeel yeel mooyee , ilama aha sabab Somaliland dimuquraadiyad goboladu ku dhacan yihiin oo Hargaisa oo kaliya dan u ah in aynu ku sii jirno ; waxa aynu u baahan nahay dimuqraadiyad ku salaysan dhaqankeenii iyo sidii aynu u soo nooleyn; dhamaan dadka reer Somaliland waa ( one family) oo dan guud wada leh ; hayeeshee dano gaar ah kala leh oo tixgalintooda iyo hoos u eegi dooda leh.
2. Waxa aan kaala tallinayaa mustafe martinow :
3. Waxa aan kugu la tallinayaa mustafe martinow: